दुवै मिर्गौला फेल भएकालाई मासिक ५ हजार भत्ता ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार दुवै मिर्गौला फेल भएकालाई मासिक ५ हजार भत्ता !
दुवै मिर्गौला फेल भएकालाई मासिक ५ हजार भत्ता !
on: १३ पुष २०७४, बिहीबार १३:३७ In: पु.समाचारTags: दुवै मिर्गौला फेल भएकालाई मासिक ५ हजार भत्ता !No Comments
काठमाण्डौ । दुवै मिर्गौला फेल भएका, क्यान्सर लागेका र पक्षघात भएका व्यक्तिलाई सरकारले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता दिने भएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि मासिक पाँच पाँच हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यस अघि सरकारले सरकारले मिर्गौलाका विरामीलाई निःशुल्क डायलासिस सेवा र क्यान्सर रोगीको उपचारका लागि एक लाख रुपैया आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसैबीच बिहीबारको बैठकलले सिटीइभिटीको ६ अर्ब ३० करोड सहायता ऋण र काठमाण्डौ विश्वविद्यालय अनुसन्धान विभागका लागि कोरिया सरकारको एक अर्ब चार करोड सहयोग स्विकार गर्ने निर्णय पनि गरेको अर्थमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
Tags: दुवै मिर्गौला फेल भएकालाई मासिक ५ हजार भत्ता !
अन्ततः रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम रोकियो, पुरानै शैलीमा बन्ने
‘हेर म मिन्स भएकी छु, चाहन्छौ भने कन्डम प्रयोग गर’
१३ पुष २०७४, बिहीबार १३:३७